04.11.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमी सदैव यादको फाँसीमा चढिरहनु छ , यादबाट नै आत्मा सच्चा सुन बन्छ।”
कुनचाहिँ बलले विकारी दृष्टिलाई तुरुन्तै परिवर्तन गरिदिन्छ?
ज्ञानको तेस्रो नेत्रको बल जब आत्मामा आउँछ तब विकारीपन समाप्त हुन जान्छ। बाबाको श्रीमत छ– प्यारा बच्चाहरू! तिमीहरू सबै आपसमा भाइ-भाइ हौ, भाइ-बहिनी हौ, तिम्रो आँखा कहिल्यै पनि विकारी हुन सक्दैन। तिमी सदैव यादको मस्तीमा रहने गर। वाह तकदिर वाह! हामीलाई भगवानले पढाउनु हुन्छ। यस्तो विचार गर्यौ भने मस्ती चढिरहन्छ।
प्यारा रूहानी बच्चाहरूलाई रूहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– रूहानी बाबा जो स्वयं पनि आत्मा नै हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँमा कुनै पनि खिया लागेको छैन। शिवबाबा भन्नुहुन्छ– ममा खिया लागेको छ? बिल्कुलै छैन। यी दादामा त सम्पूर्ण खिया लागेको थियो। यिनमा बाबाले प्रवेश गर्नु भएको छ त्यसैले मदत पनि मिल्छ। मूल कुरा हो पाँच विकारहरूको कारण आत्मामा कट अर्थात् विकार चढ्नाले अपवित्र भएको छ। जति जति बाबाको याद गरिन्छ, कट उत्रिदै जान्छ। भक्ति मार्गका कथाहरू त जन्म जन्मान्तरदेखि सुन्दै आएका छौ। यो त कुरै निराला छ। तिमीलाई अब ज्ञान सागरबाट ज्ञान मिलिरहेको छ। तिम्रो बुद्धिमा लक्ष्य-उद्देश्य छ, अरू कुनै पनि सत्सङ्ग आदिमा लक्ष्य-उद्देश्य हुँदैन। ईश्वरलाई सर्वव्यापी भनेर मेरो ग्लानि गरिरहन्छन्, ड्रामा योजना अनुसार। मनुष्यले यति पनि बुझ्दैनन्– यो ड्रामा हो। यसमा क्रिएटर, डाइरेक्टर पनि ड्रामाको वशमा हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान् भनेर गाइन्छ तर तिमीलाई थाहा छ– उहाँ पनि ड्रामाको पट्टामा चलिरहनु हुन्छ। बाबा जो स्वयं आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ, भन्नुहुन्छ– मेरो आत्मामा अविनाशी पार्ट भरिएको छ, त्यही अनुसार पढाउँछु। जे जति सम्झाउँछु, ड्रामामा निश्चित छ। अहिले तिमीलाई यस पुरुषोत्तम संगमयुगमा पुरुषोत्तम बन्नु छ। भगवानुवाच हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गरेर यस्तो लक्ष्मी-नारायण बन्नु छ। यस्तो अरू कुनै मनुष्यले भन्न सक्दैन– तिमी विश्वको मालिक बन्नु छ। तिमीलाई थाहा छ– हामी आएका हौं नै विश्वको मालिक, नरबाट नारायण बन्न। भक्ति मार्गमा त जन्म जन्मान्तर कथाहरू सुन्दै आएका थियौ, समझ केही पनि थिएन। अहिले बुझेका छौ– अवश्य यी लक्ष्मी-नारायणको राज्य स्वर्गमा थियो, अब छैन। त्रिमूर्तिको बारेमा पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। सत्ययुगमा यही एक धर्म थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले त्यो धर्म छैन, फेरि स्थापना भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म कल्प कल्पको संगमयुगमा आएर तिमी बच्चाहरूलाई पढाउँछु। यो पाठशाला हो नि। यहाँ बच्चाहरूले चरित्र पनि सुधार्नु छ। पाँच विकारहरूलाई निकाल्नु छ। तिमीले नै देवताहरूको अगाडि गएर गाउँथ्यौ– तपाई सर्वगुण सम्पन्न.... हामी पापी हौं। तिमीहरू नै देवता थियौ। सत्ययुगमा यी लक्ष्मी-नारायण पूज्य थिए फेरि कलियुगमा पुजारी बने। अब फेरि पूज्य बनिरहेका छन्। त्यहाँ पूज्य सतोप्रधान आत्माहरू थिए। उनीहरूका शरीर पनि सतोप्रधान थिए। जस्तो आत्मा त्यस्तै गहना। सुनमा मिसावट गरेपछि त्यसको भाउ कति कम हुन जान्छ। तिम्रो भाउ पनि धेरै उच्च थियो। अहिले भाउ कति कम हुन गएको छ? तिमी पूज्य थियौ, अहिले पुजारी बनेका छौ। अब जति योगमा रहन्छौ, त्यति मैला उत्रिन्छ अनि बाबासँग लभ हुँदै जान्छ, खुसी पनि हुन्छ। बाबाले स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! चार्ट राख, सारा दिनमा मैले कति समय याद गर्छु? यादको यात्रा, यो शब्द ठीक छ। याद गर्दा गर्दा, मैला निस्कदा निस्कदा अन्त मति सो गति हुन्छ। ती पण्डाले त मानिसहरूलाई यात्रामा लैजान्छन्। यहाँ त आत्माले स्वयं यात्रा गर्छ। आफ्नो परमधाम जानु छ किनकि ड्रामाको चक्र अब पूरा हुन्छ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ– यो धेरै फोहोरी दुनियाँ हो। परमात्मालाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। त्यसैले भनिन्छ– विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उनीहरूको लागि त यो नर्क नै स्वर्ग समान छ। उनीहरूको बुद्धिमा यो कुरा बस्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई यो सबै विचार सागर मन्थन गर्नको लागि धेरै एकान्त चाहिन्छ। यहाँ त एकान्त धेरै राम्रो छ, त्यसैले मधुवनको महिमा छ। बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनु पर्छ। हामी जीव आत्माहरूलाई परमात्माले पढाइरहनु भएको छ। कल्प पहिला पनि यसरी नै पढाउनु भएको थियो। कृष्णको कुरा होइन। उनी त साना बच्चा थिए। उनी आत्मा, उहाँ परम आत्मा। पहिलो नम्वरको आत्मा श्रीकृष्ण फेरि लास्ट नम्बरमा आइपुगेका छन्। त्यसैले नाम पनि बेग्लै हुन गयो। धेरै जन्महरूको अन्तिम जन्ममा नाम त फरक हुन्छ नि। भन्छन्– यिनी त दादा लेखराज हुन्। यो हो नै धेरै जन्महरूको अन्तिम जन्म। बाबा भन्नुहुन्छ– म यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई राजयोग सिकाइरहेको छु। बाबा कसैमा त आउनु हुन्छ नि। शास्त्रहरूमा यी कुरा छँदै छैनन्। बाबा तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनु हुन्छ, तिमीले नै पढ्छौ। फेरि सत्ययुगमा यो ज्ञान हुँदैन। त्यहाँ हुन्छ प्रारब्ध। बाबा संगममा आएर यो ज्ञान सुनाउनु हुन्छ अनि तिमीले पद पाउँछौ। यो समय नै हो बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्सा प्राप्त गर्ने। त्यसैले बच्चाहरूले लापर्बाही गर्नु हुँदैन। मायाले धेरै लापर्बाही गराउँछ फेरि सम्झिइन्छ उनीहरूको भाग्यमा छैन। बाबाले त पुरुषार्थ गराउनु हुन्छ। तकदिरमा कति फरक पर्न जान्छ। कोही पास, कोही फेल हुन्छन्। डबल शिरताजधारी बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु पर्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ– ठिकै छ गृहस्थ व्यवहारमा बस। लौकिक पिताको कर्जा पनि बच्चाहरूले तिर्नु छ। नियममा चल्नु छ। यहाँ त सबै छन् नियम विपरीत। तिमीलाई थाहा छ– हामी नै यति उच्च पवित्र थियौं, फेरि तल झर्दै आयौं। अब फेरि पवित्र बन्नु छ। प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू सबै बी.के. हौ त्यसैले विकारी दृष्टि हुन सक्दैन किनकि तिमीहरू सबै भाइ-बहिनी भयौ नि। यो उपाय बाबाले बताउनु हुन्छ। तिमीहरू सबैले बाबा, बाबा भनिरहन्छौ त्यसैले भाइ-बहिनी भयौ। भगवानलाई सबैले बाबा भन्छन् नि। आत्माहरूले भन्छन्– हामी शिव बाबाका सन्तान हौं। फेरि शरीरमा भएकाले भाइ-बहिनी ठहरियौं। फेरि हाम्रो विकारी दृष्टि किन हुन्छ? तिमीले ठूला ठूला सभामा यो सम्झाउन सक्छौ। हामी सबै भाइ-भाइ हौं फेरि प्रजापिता ब्रह्माद्वारा रचिएका हौं भने भाइ-बहिनी हुन गयौं, अरू कुनै सम्बन्ध छैन। हामी सबै एउटै पिताका बच्चाहरू हौं। एउटै पिताका बच्चाहरू फेरि विकारमा कसरी जान सक्छन्? भाइ-भाइ पनि हुन् भने भाइ-बहिनी पनि हुन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– यी आँखा अत्यन्त धोकेबाज छन्। आँखाले नै राम्रा चीजहरू देख्छ भने लिने दिल हुन्छ। यदि आँखाले देखेन भने तृष्णा नै उत्पन्न हुँदैन। यी विकारी दृष्टिलाई बदल्नु पर्छ। भाइ-बहिनी विकारमा त जान सक्दैनन्। त्यो दृष्टि निस्किनु पर्छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्रको बल हुनु पर्छ। आधा कल्पसम्म यी आँखाले काम गरेका छन्, अब बाबा भन्नुहुन्छ– सारा कट कसरी निस्कन्छ। हामी आत्माहरू जो पवित्र थियौं, त्यसमा खिया लागेको छ। जति बाबालाई याद गर्छौं त्यति बाबासँग लभ बढ्छ। पढाइबाट होइन, यादले लभ बढ्छ। यो हो नै प्राचीन योग, जसबाट आत्मा पवित्र बनेर आफ्नो धाममा जान्छ। सबै भाइहरूलाई आफ्नो पिताको परिचय दिनु छ। सर्वव्यापीको ज्ञानले त एकदम जोडले गिरेका छौं। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ– ड्रामा अनुसारको तिम्रो पार्ट हो। राजधानी अवश्य स्थापना हुनु छ। जति कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेको थियो, त्यति नै उसले गर्छ अवश्य। तिमीले साक्षी भएर हेर्छौ। यी प्रदर्शनी आदि त धेरै देख्छौ। तिम्रो ईश्वरीय मिसन हो। यो हो निराकारी गड फादरली मिसन। त्यो त हुन्छ क्रिश्चियन मिसन, बौद्धी मिसन। यो हो निराकारी ईश्वरीय मिसन। निराकार त अवश्य कुनै शरीरमा आउनु हुन्छ नि। तिमी निराकार आत्माहरू पनि मसँगै रहन्थ्यौ नि। यो ड्रामा कस्तो छ, यो कसैको पनि बुद्धिमा छैन। रावण राज्यमा सबै विपरीत बुद्धि बनेका छन्। अब बाबासँग प्रीत लगाउनु छ। तिम्रो प्रतिज्ञा छ– मेरो त एक बाबा दोस्रो न कोही। नष्टोमोहा बन्नु छ। धेरै मेहनत छ। यो त फाँसीमा चढ्नु जस्तै हो। बाबालाई याद गर्नुको मतलब फाँसीमा चढ्नु। शरीरलाई बिर्सेर आत्मालाई बाबाको यादमा जानु छ। बाबाको याद धेरै जरुरी छ। नत्र कट कसरी उत्रिन्छ? बच्चाहरूमा भित्रैदेखि खुसी रहनु पर्छ– शिवबाबाले हामीलाई पढाउनु हुन्छ। कसैले सुन्यो भने भन्छन्– यो के भन्दैछन्? किनकि उनीहरूले त कृष्णलाई भगवान सम्झन्छन्।
तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनु पर्छ, हामी अब कृष्णको राजधानीमा जाँदैछौं। हामी पनि राजकुमार, राजकुमारी बन्न सक्छौं। उनी हुन् फस्ट प्रिन्स। नयाँ घरमा बस्छन्। पछि जुन बच्चाहरूले जन्म लिन्छन् उनीहरू त ढिलो आएका हुन् नि। जन्म स्वर्गमा नै हुन्छ। तिमी पनि स्वर्गमा प्रिन्स बन्न सक्छौ। सबै त पहिलो नम्बरमा आउन सक्दैनन्। नम्बरवार माला बन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! खुब पुरुषार्थ गर। यहाँ तिमी आएका हौ नरबाट नारायण बन्न। कथा पनि सत्य नारायणको हो। सत्य लक्ष्मीको कथा कहिल्यै सुनेका छैनौ। प्यार पनि सबैको कृष्णमा नै छ। कृष्णलाई नै झुलामा झुलाउँछन्। राधालाई किन झुलाउँदैनन्? ड्रामा योजना अनुसार उनको नाम चल्दै आएको छ। तिम्रो साथी त राधा हुन् फेरि पनि प्यार कृष्णसँग छ। उनको ड्रामामा पार्ट पनि यस्तै छ। बच्चाहरू सधैं प्यारा हुन्छन्। बाबा बच्चाहरूलाई देखेर कति खुसी हुनुहुन्छ। बच्चा जन्मियो भने खुसी हुन्छ, बच्ची जन्मिन् भने अतालिन्छन्। कसैले त मारी पनि दिन्छन्। रावणको राज्यमा चरित्र कति फरक हुन जान्छ। गाउँछन् पनि– हजुर सर्वगुण सम्पन्न... हुनुहुन्छ। हामी निर्गुण छौं। अब बाबा भन्नुहुन्छ– फेरि यस्तै गुणवान बन। अहिले जानेका छौ– हामी अनेकौं पटक यस विश्वको मालिक बनेका छौं। अब फेरि बन्नु छ। बच्चाहरू धेरै खुसी हुनु पर्छ। ओहो! शिवबाबाले हामीलाई पढाउनु हुन्छ। बसेर यही चिन्तन गर। भगवानले हामीलाई पढाउनु हुन्छ। वाह तकदिर वाह! यस्तै यस्तै विचार गरेर मस्त हुनु पर्छ। वाह तकदिर वाह! बेहदको बाबा हामीले पाएका छौं, हामीले बाबालाई नै याद गर्छौं। पवित्रता धारण गर्नु छ। हामी यो बन्छौं, दैवी गुण धारण गर्छौं। यो पनि मनमनाभव हो नि। बाबाले हामीलाई यो बनाउनु हुन्छ। यो त यथार्थ अनुभवको कुरा हो।
बाबा प्यारा बच्चाहरूलाई राय दिनु हुन्छ– चार्ट लेख, एकान्तमा बसेर यसरी आफैंसँग कुरा गर। यो ब्याजलाई त छातीमा लगाइराख। भगवानको श्रीमत अनुसार हामी यो बन्दैछौं। यिनलाई हेर्दै उहाँलाई प्यार गर। बाबाको यादद्वारा हामी यो बन्छौं। बाबा, हजुरको त कमाल छ, बाबा हामीलाई पहिला थाहै थिएन– हजुरले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। नवधा भक्तिमा दर्शनको लागि गला काट्न, प्राण त्याग्न लाग्छन्, तब दर्शन मिल्छ। यस्तै यस्तैको नै भक्त माला बनेको छ। भक्तहरूको मान पनि छ। कलियुगका भक्त त बादशाह जस्तै छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको बेहदको बाबासँग प्रीत छ। एक बाबा सिवाय अरू कोही याद नरहोस्। एकदम लाइन क्लियर हुनु पर्छ। अब हाम्रो ८४ जन्म पूरा भयो। अब हामी बाबाको आदेश अनुसार पूरा चल्छौं। काम महाशत्रु हो, यससँग हार खानु छैन। हार खाएर फेरि पश्चात्ताप गरेर के फाइदा? एकदम हड्डी नै टुट्छ। अत्यन्त कडा सजाय मिल्छ। कट उत्रिनुको बदला झन् थपिन्छ। योग लाग्दैन। यादमा रहन धेरै मेहनत लाग्छ। धेरै गफ लगाउँछन्, हामी त बाबाको यादमा रहन्छौं भनेर। बाबा जान्नु हुन्छ, बस्न सक्दैनन्। यसमा मायाको ठूलो तुफान आउँछ। यस्ता यस्ता सपना आउँछन्, एकदमै दु:ख दिन्छन्। ज्ञान त धेरै सहज छ। सानो बच्चाले पनि सम्झाउन सक्छ। बाँकी यादको यात्रामा नै ठूलो समस्या छ। हामी धेरै सर्भिस गर्छौं भनेर खुसी हुनु छैन। यादको गुप्त सर्भिस गरिराख। यिनलाई त नशा रहन्छ– म शिवबाबाको एक्लो बच्चा हुँ। बाबा विश्वको रचयिता हुनुहुन्छ त्यसैले अवश्य म पनि स्वर्गको मालिक बन्छु। प्रिन्स बन्दैछु, यस्तो आन्तरिक खुसी रहनु पर्छ। तर जति तिमी बच्चाहरू यादमा रहन सक्छौ, त्यति म सक्दिनँ। बाबाले त धेरै ख्याल राख्नु पर्छ। बच्चाहरूलाई कहिल्यै पनि ईर्ष्या हुनु हुँदैन– बाबाले ठूला मान्छेहरूको खातिरी किन गर्नु हुन्छ? बाबाले हरेक बच्चाको अवस्था हेरेर उसको कल्याणको लागि हरेकलाई त्यही अनुसार चलाउनु हुन्छ। टिचरले जान्नु भएको छ हरेकलाई कसरी चलाउनु पर्छ। बच्चाहरूले यसमा संशय ल्याउनु हुँदैन। अच्छा!
१) एकान्तमा बसेर आफैंसँग कुरा गर्नु छ। आत्मामा जुन खिया लागेको छ त्यसलाई हटाउनको लागि यादको यात्रामा रहनु छ।
२) कुनै पनि कुरामा संशय उठाउनु हुँदैन, ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। आन्तरिक खुसीमा रहनु छ। आफ्नो गुप्त सेवा गर्नु छ।
सेवा गर्दै उपराम स्थितिमा रहने योगयुक्त , युक्तियुक्त सेवाधारी भव
जो योगयुक्त, युक्तियुक्त सेवाधारी हुन्छ, ऊ सेवा गदा-गर्दै पनि सदा उपराम रहन्छ। यस्तो होइन, धेरै सेवा भएकोले अशरीरी हुन सकिन। तर याद रहोस् मेरो सेवा होइन, बाबाले दिनु भएको हो, अनि निर्बन्धन रहन सकिन्छ। ट्रस्टी हुँ, बन्धनमुक्त हुँ यस्तो प्राक्टिस गर। अतिको समयमा अन्तको स्टेज, कर्मातीत अवस्थाको अभ्यास गर। जसरी बीच-बीचमा संकल्पहरूको ट्राफिक कण्ट्रोल गर्छौ, त्यस्तै अतिको समयमा अन्त्यको स्टेजको अनुभव गर, तब अन्त्यको समय पास विद् अनर बन्न सक्छौ।
शुभ-भावनाले कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गरिदिन्छ।